IBhayibhile—Funda ILizwi LikaThixo Ukuze Ufumane Ubulumko | Sondela
Ubulumko ‘Elizwini LikaThixo’
1, 2. Yiyiphi “ileta” asibhalele yona uYehova, yaye ngoba?
NGABA uyakhumbula ukugqibela kwakho ukufumana ileta evela kumntu omthandayo ohlala kude? Zimbalwa izinto ezisivuyisa njengeleta echukumisayo evela kubani esimxabisileyo. Kusivuyisa gqitha ukuva ngendlela aphila ngayo, amava akhe, noko aceba ukukwenza. Unxibelelwano olunjalo luyabasondeza abo sibathandayo, nokuba bahlala kude.
2 Ngoko, yintoni enokusivuyisa ngakumbi kunokufumana isigidimi esibhaliweyo esivela kuThixo esimthandayo? Eneneni, uYehova uye wasibhalela “ileta”—iLizwi lakhe, iBhayibhile. Kulo usichazela ngaye, ngoko akwenzileyo, ngoko aceba ukukwenza, nangokunye okuninzi. UYehova usinike iLizwi lakhe kuba ufuna sisondele kuye. UThixo wethu onobulumko bonke ukhethe eyona ndlela isemagqabini yokunxibelelana nathi. Kukho ubulumko obungenakuthelekiswa nanto kwindlela iBhayibhile ebhalwe ngayo nakoko ikuquletheyo.
Kutheni Esinike ILizwi Elibhaliweyo?
3. UYehova wawudlulisela njani uMthetho kuMoses?
3 Abanye basenokubuza, ‘Kutheni uYehova engakhethanga indlela ephawuleka ngakumbi—njengokuthetha esezulwini—ekunxibelelaneni kwakhe nabantu?’ Eneneni, uYehova wakha wathetha esezulwini esebenzisa abameli bakhe abaziingelosi. Ngokomzekelo, wenjenjalo xa wayenika uSirayeli uMthetho. (Galati 3:19) Ilizwi elalivela ezulwini lalisoyikeka—kangangokuba amaSirayeli awayesoyika amcela uYehova ukuba angathethi nawo ngaloo ndlela kodwa anxibelelane nawo ngoMoses. (Eksodus 20:18-20) Ngaloo ndlela, uMthetho, owawunemimiselo emalunga nama-600, wadluliselwa ngoMoses ngomlomo, igama negama.
4. Chaza isizathu sokuba bekungayi kuba yindlela ethembekileyo ukuyidlulisela ngomlomo imithetho kaThixo.
4 Kodwa, kuthekani ukuba loo Mthetho wawungazange ubhalwe? Ngaba uMoses wayenokuzikhumbula zonke iinkcukacha zawo aze awudlulisele ngokuchanileyo kuhlanga luphela? Kuthekani ngezizukulwana ezaziza kulandela? Ngaba kwakuza kufuneka zithembele kuphela kumazwi omlomo? Oko bekungenakuba yindlela ethembekileyo yokudlulisela imithetho kaThixo. Khawucinge nje into ebinokwenzeka ukuba ubunokudlulisela ibali kwisihlwele sabantu ngokuthi uchazele umntu wokuqala aze yena achazele omnye naye achazele omnye njalo njalo. Beliya kufika kumntu wokugqibela selingasafani nelo ubulichazele umntu wokuqala. Lona iLizwi likaThixo alikhange libe kwingozi efanayo.
5, 6. Yintoni uYehova ayalela uMoses ukuba ayenze ngamazwi Akhe, yaye kutheni kuyintsikelelo nje kuthi ukuba neLizwi likaYehova elibhaliweyo?
5 Ngobulumko uYehova uye wakhetha ukuba abhalwe phantsi amazwi akhe. Wayalela uMoses esithi: “Wabhale phantsi la mazwi, kuba ngawo la mazwi ndenza umnqophiso kunye nawe noSirayeli.” (Eksodus 34:27) Kwaqala ngaloo ndlela ukubhalwa kweBhayibhile, ngowe-1513 B.C.E. Kwiminyaka eli-1 610 eyalandelayo, uYehova ‘wathetha kangangezihlandlo ezininzi’ kubabhali abamalunga nama-40 abathi bona babhala iBhayibhile. (Hebhere 1:1) Ekuhambeni kwexesha, abakhupheli abazinikeleyo bavelisa ngenyameko enkulu imibhalo echanileyo ukuze balondoloze iZibhalo.—Ezra 7:6; INdumiso 45:1.
6 Ngokwenene uYehova usisikelele ngokunxibelelana nathi ngembalelwano. Ngaba wakha wafumana ileta exabiseke kakhulu kuwe—mhlawumbi ngenxa yokuba ilukhuthazo kuwe—kangangokuba uye wayigcina waza wayifunda ngokuphindaphindiweyo? Kunjalo ke ‘nangeleta’ uYehova asibhalele yona. Ngenxa yokuba uYehova ewabhale phantsi amazwi akhe, siyakwazi ukuwafunda rhoqo size sicamngce ngoko akutshoyo. (INdumiso 1:2) Sinokufumana ‘intuthuzelo yeZibhalo’ nanini na siyifuna.—Roma 15:4.
Kutheni Esebenzise Ababhali Abangabantu?
7. Bubonakala njani ubulumko bukaYehova ekusebenziseni kwakhe ababhali abangabantu?
7 Ngobulumko, uYehova usebenzise abantu ukubhala iLizwi lakhe. Khawucinge nje ngoku: Ukuba uYehova wayesebenzise iingelosi ukubhala iBhayibhile, ngaba ibiya kuba nomtsalane ngendlela efanayo? Enyanisweni, iingelosi beziya kumchaza uYehova ngokwembono yazo ephakamileyo, zichaze ukuzinikela kwazo kuye, zize zichaze nangabakhonzi abangabantu abathembekileyo bakaThixo. Kodwa ngaba ngokwenene besiya kukwazi ukuziqonda iingcamango zezidalwa zomoya ezigqibeleleyo, ezinolwazi, amava namandla angaphezulu lee kunawethu?—Hebhere 2:6, 7.
“Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo”
8. Ababhali beBhayibhile bavunyelwa ngayiphi indlela ukuba basebenzise amandla abo engqondo? (Bona kwanombhalo osemazantsi.)
8 Ngokusebenzisa kwakhe ababhali abangabantu, uYehova usinike kanye oko sikufunayo—ingxelo ‘ephefumlelwe nguThixo’ ukanti ekumgangatho wabantu. (2 Timoti 3:16) Ukwenze njani oku? Kwiimeko ezininzi, kubonakala ukuba wabavumela ababhali ukuba basebenzise amandla abo engqondo ekukhetheni “amazwi ayolisayo nokubhala amazwi achanileyo enyaniso.” (INtshumayeli 12:10, 11) Kungako nje iBhayibhile ibhalwe ngezimbo ezahlukahlukeneyo zokubhala; isimbo sombhali ngamnye sasixhomekeka kwimvelaphi yakhe nobuntu bakhe. * Ukanti, aba bantu “bathetha ngokuphuma kuThixo njengoko babeqhutywa ngumoya oyingcwele.” (2 Petros 1:21) Ngoko ke, ngokwenene ekugqibeleni kwaphuma “ilizwi likaThixo.”—1 Tesalonika 2:13.
9, 10. Kutheni ukusetyenziswa kwababhali abangabantu kuyenza ibe nomtsalane nje iBhayibhile?
9 Ukusetyenziswa kwababhali abangabantu kuyenza iBhayibhile ibe nomtsalane kakhulu. Ababhali bayo babengabantu abaneemvakalelo njengathi. Njengoko babengafezekanga, bajamelana nezilingo neengcinezelo ezifanayo nezethu. Kwezinye iimeko, umoya kaYehova wawubaphefumlela ukuba babhale ngeemvakalelo nangeengcinezelo zabo. (2 Korinte 12:7-10) Ngoko babhala ngamazwi abo, amazwi awayengenakuvakaliswa yingelosi.
10 Ngokomzekelo, cinga nje ngoKumkani uDavide wakwaSirayeli. Emva kokwenza izono ezinzulu, uDavide waqamba indumiso awaphalaza kuyo imbilini yakhe, ebongoza uThixo ukuba amxolele. Wabhala wathi: “Ndihlambulule [kwisono] sam. Kuba ukunxaxha kwam ndiyakwazi, nesono sam siphambi kwam rhoqo. Khangela! Ngenimba ndazalelwa esiphosweni, yaye uma wandikhawulela esonweni. Musa ukundilahla phambi kobuso bakho; nomoya wakho oyingcwele musa ukuwususa kum. Imibingelelo kuThixo ngumoya owaphukileyo; intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo, Thixo, akuyi kuyidela.” (INdumiso 51:2, 3, 5, 11, 17) Ngaba akuchukunyiswa yintlungu yalo mbhali? Ngubani omnye ngaphandle komntu ongafezekanga obenokuthetha ngokusuk’ entliziyweni ngolo hlobo?
Sisiphi Isizathu Esiyenza Ibe Yincwadi Ethetha Ngabantu?
11. Yiyiphi imizekeliso yeziganeko zokwenene ebomini equkiweyo eBhayibhileni ukwenzela “ukuyalela thina”?
11 Kukho enye into enegalelo ekwenzeni iBhayibhile ibe nomtsalane. Ubukhulu becala, iyincwadi ethetha ngabantu—abantu bokoqobo, abo babekhonza uThixo nabo babengamkhonzi. Sifunda ngamava abo, ubunzima novuyo lwabo. Sibona imiphumo yokhetho lwabo ebomini. Ezo ngxelo zaqukwa ukwenzela “ukuyalela thina.” (Roma 15:4) Ngale mizekeliso yeziganeko zokwenene ebomini, uYehova ufundisa ngeendlela ezichukumisa iintliziyo zethu. Khawuqwalasele imizekelo embalwa.
12. Iingxelo zeBhayibhile eziphathelele abantu abangathembekanga zisinceda ngayiphi indlela?
12 IBhayibhile isixelela ngabantu abangathembekanga, kwanabangendawo, nangoko kwabahlelayo. Kwezi ngxelo, sibona iimpawu zabo ezingathandekiyo, nto leyo eyenza kube lula ngathi ukuqonda. Ngokomzekelo, nguwuphi umyalelo nxamnye nokunganyaniseki obuya kuba namandla ngakumbi kunomzekelo wokoqobo kaYudas owangcatsha uYesu? (Mateyu 26:14-16, 46-50; 27:3-10) Iingxelo ezilolu hlobo zizichukumisa ngakumbi iintliziyo zethu, zisinceda ukuba siziqonde yaye siyigatye imikhwa ecekisekayo.
13. IBhayibhile isinceda ngayiphi indlela ukuba sihlakulele iimpawu ezintle?
13 Kwakhona iBhayibhile ichaza abakhonzi abaninzi abathembekileyo bakaThixo. Sifunda ngokuzinikela nokunyaniseka kwabo. Sibona imizekelo yokoqobo yeempawu esifanele sizihlakulele ukuze sisondele kuThixo. Ngokomzekelo, khawucinge nje ngokholo. IBhayibhile iyaluchaza ukholo ize isixelele nendlela olubaluleke ngayo ukuze sikholise uThixo. (Hebhere 11:1, 6) Kodwa iBhayibhile ikwaqulethe nemizekelo yokoqobo yokuboniswa kokholo. Khawucinge nje ngokholo awalubonisayo uAbraham xa wayeza kunikela ngoIsake. (Genesis, isahluko 22; Hebhere 11:17-19) Iingxelo ezilolo hlobo zenza ukuba igama elithi “ukholo” libe nentsingiselo engakumbi yaye kuba lula ukuliqonda. Hayi indlela ekububulumko ngayo ukuba uYehova engapheleli nje ngokusibongoza ukuba sihlakulele iimpawu ezintle kodwa asinike nemizekelo yokoqobo yokwenjenjalo!
14, 15. Isixelela ntoni iBhayibhile ngebhinqa elithile eleza etempileni, yaye yintoni esiyifundayo ngoYehova kule ngxelo?
14 Ngokufuthi iingxelo zokoqobo ezifumaneka eBhayibhileni zisifundisa okuthile ngohlobo lomntu alulo uYehova. Khawuhlolisise oko sikufundayo ngebhinqa uYesu alibona etempileni. Ngoxa wayehleli kufuphi nezikhongozelo zobuncwane, uYesu wayebukele njengoko abantu babefaka iminikelo yabo. Abantu abaninzi abazizityebi beza, banikela “okuphuma kwintsalela yabo.” Kodwa uYesu wondela mhlolokazi uthile owayeswele. Umnikelo wakhe ‘wawuziingqekembe ezimbini ezincinane, ezinexabiso elincinane kakhulu.’ * Yayiyimadlana yokugqibela awayenayo. UYesu, owayenembono kaYehova ngokugqibeleleyo, wathi: “Lo mhlolokazi ulihlwempu uphose ngaphezu kwabo bonke abo baphose imali kwizikhongozelo zobuncwane.” Ngokokutsho kwaloo mazwi, wayenikele ngaphezu kwabo bonke abanye behlanganisene.—Marko 12:41-44; Luka 21:1-4; Yohane 8:28.
15 Ngaba ayikuhlab’ umxhelo na into yokuba kubo bonke abantu abeza etempileni ngolo suku, kwakhethwa lo mhlolokazi waza wakhankanywa eBhayibhileni? Ngalo mzekelo, uYehova usifundisa ukuba unguThixo onoxabiso. Uyakuvuyela ukwamkela iminikelo yethu yomphefumlo uphela, enoba ingakanani na xa ithelekiswa noko abanye bakunikelayo. Ayikho enye indlela ebaluleke ngolu hlobo uYehova abenokusifundisa ngayo le nyaniso ichukumisayo!
Oko Kungaqukwanga EBhayibhileni
16, 17. Bubonakala njani ubulumko bukaYehova kwanakoko akhethe ukungakuchazi eLizwini lakhe?
16 Xa ubhalela umntu omthandayo ileta, zininzi kakhulu izinto onokuziquka. Ngoko usebenzisa ukuqonda ekukhetheni oko unokukubhala. Ngokukwanjalo, noYehova ukhethe ukukhankanya abantu kunye neziganeko ezithile eLizwini lakhe. Kodwa kwezi ngxelo, iBhayibhile ayisoloko izichaza zonke iinkcukacha. (Yohane 21:25) Ngokomzekelo, xa iBhayibhile isixelela ngomgwebo kaThixo, inkcazelo eyinikelayo isenokungaphenduli mbuzo ngamnye esinawo. Ubulumko bukaYehova bubonakala nakoko akhethe ukungakuchazi eLizwini lakhe. Njani?
17 Indlela ebhalwe ngayo iBhayibhile ivavanya oko kusezintliziyweni zethu. AmaHebhere 4:12 athi: “Ilizwi [okanye, isigidimi] likaThixo liphilile, linamandla yaye libukhali ngaphezu kwalo naliphi na ikrele elintlangothi-mbini, lihlaba lide lahlule umphefumlo nomoya . . . yaye liyakwazi ukuphicotha iingcamango notyekelo lwentliziyo.” Isigidimi seBhayibhile sendela nzulu, sityhile iingcamango neentshukumisa zethu zokwenene. Abo basifunda ngeliso eligxekayo badla ngokukhutyekiswa ziingxelo ezingenankcazelo ipheleleyo yokubanelisa. Abanjalo basenokude bathandabuze enoba ngokwenene uYehova unothando, ubulumko nokusesikweni.
18, 19. (a) Kutheni singafanele sikhathazeke ukuba ingxelo ethile yeBhayibhile isibangela sizibuze imibuzo esingenakuyiphendula okwelo xesha? (b) Yintoni efunekayo ukuze siliqonde iLizwi likaThixo, yaye oku kubunikela njani ubungqina bobulumko obukhulu bukaYehova?
18 Noko ke, xa siyifundisisa ngokucokisekileyo iBhayibhile ngentliziyo enyanisekileyo, simbona uYehova ngendlela achazwe ngayo eBhayibhileni iphela. Ngoko ke, asikhathazeki xa ingxelo ethile isibangela sizibuze imibuzo esingenakuyiphendula okwelo xesha. Singakuzekelisa ngolu hlobo oku: Xa sihlanganisa iziqwenga ezenza umfanekiso omkhulu opheleleyo, sisenokungasifumani ekuqaleni isiqwenga esithile okanye singayiboni indawo isiqwenga esithile esingena kuyo kulo mfanekiso. Ukanti, sisenokuba sihlanganise iziqwenga ezaneleyo ezenza ukuba siqonde ukuba lo mfanekiso ukhangeleka njani xa uphelele. Ngokufanayo, xa sifundisisa iBhayibhile, kancinane kancinane sifunda ngohlobo loThixo alulo uYehova, yaye sifumana umfanekiso opheleleyo. Kwanokuba ekuqaleni asiyiqondi ingxelo ethile okanye asiboni ukuba ihambelana njani nobuntu bukaThixo, ukufundisisa kwethu iBhayibhile sele kusifundise ngokwaneleyo ngoYehova ukuze sikwazi ukubona ukuba ngokuqinisekileyo unguThixo onothando nokusesikweni.
19 Ngoko, ukuze siliqonde iLizwi likaThixo, simele silifundisise ngentliziyo enyanisekileyo nangengqondo ephangaleleyo. Ngaba oku akubobungqina bobulumko obukhulu bukaYehova? Abantu abakrelekrele banokubhala iincwadi ezinokuqondwa kuphela ngabo ‘bazizilumko nabaziingqondi.’ Kodwa nguThixo onobulumko kuphela onokukwazi ukubhala incwadi enokuqondwa kuphela ngabo baneentshukumisa ezifanelekileyo!—Mateyu 11:25.
Incwadi ‘Enobulumko Bobuqili’
20. Kutheni inguYehova kuphela onokusixelela eyona ndlela ilungileyo sinokuphila ngayo, yaye yintoni equlethwe yiBhayibhile enokusinceda?
20 ELizwini lakhe, uYehova usixelela eyona ndlela ilungileyo yokuphila. NjengoMdali wethu, uzazi ngaphezu kwethu iintswelo zethu. Yaye iintswelo ezisisiseko zabantu—kuquka umnqweno wokuthandwa, ukonwaba nokuba nolwalamano oluphumelelayo—azitshintshanga. IBhayibhile iqulethe inkcazelo eninzi ‘yobulumko bobuqili’ enokusinceda ukuba siphile ubomi obunentsingiselo. (IMizekeliso 2:7) Candelo ngalinye lale ncwadi linesahluko esibonisa indlela esinokusisebenzisa ngayo isiluleko sobulumko esiseBhayibhileni, kodwa makhe sihlolisise umzekelo nje omnye.
21-23. Sisiphi isiluleko sobulumko esinokusinceda ukuba siphephe ukufukama umsindo nengqumbo?
21 Ngaba ukhe waphawula ukuba abantu abafukame ingqumbo nenzondo badla ngokuzenzakalisa bona ngokwabo? Ingqumbo iluxanduva olukhulu ebomini. Xa siyifukamile, ithimba iingcinga zethu, isiphulukanise noxolo kunye novuyo. Uhlolisiso lwezenzululwazi lubonisa ukuba ukufukama ingqumbo kusibeka esichengeni sokuhlaselwa sisifo sentliziyo nezinye izifo ezininzi ezinganyangekiyo. Kude kudala ngaphambi kolo hlolisiso lwezenzululwazi, ngobulumko iBhayibhile yathi: “Wuyeke umsindo uyishiye ingqumbo.” (INdumiso 37:8) Kodwa sinokukwenza njani oko?
22 ILizwi likaThixo linikela esi siluleko sobulumko: “Ingqiqo yomntu ngokuqinisekileyo imenza azeke kade umsindo, yaye kuyinto entle kuye ukukubetha ngoyaba ukunxaxha.” (IMizekeliso 19:11) Ingqiqo bubuchule bokubona ubunzulu bento, ungaboni nje okuphambi kwamehlo. Ingqiqo izala ukuqonda, kuba iyasinceda sihlolisise isizathu sokuba umntu athethe okanye enze izinto ngendlela ethile. Ukuzama ukuqonda iintshukumisa, iimvakalelo neemeko zakhe zokoqobo, kunokusinceda ukuba siyeke ukumgxeka.
23 IBhayibhile iqulethe eli cebiso: “Qhubekani ninyamezelana yaye nixolelana ngesisa.” (Kolose 3:13) Ibinzana elithi “qhubekani ninyamezelana” libonisa ukuba sifanele sibe nomonde omnye komnye, siwanyamezele amakhwiniba abanye. Ukunyamezelana ngaloo ndlela kuya kusinceda ukuba singafukami ingqumbo. ‘Ukuxolela’ kuthetha ukuyisusa ingqumbo. UThixo wethu olumkileyo uyazi ukuba kufuneka sibaxolele abanye nanini na kunokwenzeka. Oku akuncedi nje bona kuphela kodwa nathi kusinika uxolo lwengqondo nolwentliziyo. (Luka 17:3, 4) Hayi indlela obubalasele ngayo ubulumko obufumaneka eLizwini likaThixo!
24. Uba yintoni umphumo wokuphila ngokuvisisana nobulumko bobuthixo?
24 Ngokuqhutywa luthando lwakhe olungapheliyo, uYehova uye wafuna ukunxibelelana nathi. Ukhethe eyona ndlela ifanelekileyo—“ileta” ebhalwe ngababhali abangabantu ngaphantsi kolwalathiso lomoya oyingcwele. Ngenxa yoko, iqulethe ubulumko bukaYehova. Obu bulumko ‘bukholosekile kakhulu.’ (INdumiso 93:5) Njengoko siphila ngokuvisisana nabo nanjengoko sisabelana nabanye ngabo, ngokwemvelo siya kusondela kuThixo wethu onobulumko bonke. Kwisahluko esilandelayo, siza kuxubusha omnye umzekelo obalaseleyo wobulumko bukaYehova obugqithiseleyo: ukukwazi kwakhe ukuxela ikamva nokuzalisekisa injongo yakhe.
^ isiqe. 8 Ngokomzekelo, uDavide, owayengumalusi, usebenzisa imizekelo ehlobene nobomi bakhe njengomalusi. (INdumiso 23) UMateyu, owayengumqokeleli werhafu, ubhekisela kakhulu kumanani nakwixabiso lemali. (Mateyu 17:27; 26:15; 27:3) ULuka, owayengugqirha, usebenzisa amazwi abonisa imvelaphi yakhe yezamayeza.—Luka 4:38; 14:2; 16:20.
^ isiqe. 14 Nganye yezi ngqekembe yayiyilepton, eyona ngqekembe incinane yamaYuda yaloo maxesha. Iilepton ezimbini zaziliqhezu elincinane kakhulu lomvuzo wosuku. Ezi ngqekembe zimbini zazinganelanga ukuba zingathenga nongqatyana lo omnye, eyona ntaka yayixabisa imali ephantsi eyayityiwa ngamahlwempu.
IMizekeliso 2:1-6 Nguwuphi umzamo ofunekayo ukuze sifumane ubulumko obuseLizwini likaThixo?
IMizekeliso 2:10-22 Ziziphi iindlela esiya kungenelwa ngazo ukuba siphila ngokuvisisana nesiluleko seBhayibhile sobulumko?
Roma 7:15-25 Le ngxelo ibubonisa njani ubulumko bokusebenzisa abantu ekubhaleni iLizwi likaThixo?
1 Korinte 10:6-12 Yintoni esinokuyifunda kwimizekelo elumkisayo yeBhayibhile ebandakanya uSirayeli?